Nahatratra 24 gony mahery no tratra nanomboka ny 6 ka hatramin’ny 9 septambra teo. Nifanehitra ireo jiolahy mitam-basy miisa 11 nitondra rongony 20 kitapo sy ny zandary avy ao amin'ny tobin-janaparitra Tritriva ny atoandron'ny 9 septambra 2019, tao Sakoabe, Tritriva, kaominina Soamatasy, Ihosy. Na nirongo basim-borona Baïkal kalibra 12 sy basy poleta vita gasy iray aza ireo jiolahy dia voasambotra ihany noho ny fahaiza-manaon'ireo zandary.
Rongony 22 kitapo milanja 286kg koa no sarona tao amin'ny fokontany Andravinambo, kaominina Antsirabe-nord, distrikan’i Vohémar, SAVA ny 6 septambra 2019. Araka ny loharanom-baovao avy amina tsara sitrapo ka notrandrahan'ny zandary tao Ampanefena no nahatrarana ireo rongony sy ny jolahy miisa roa tompony.
Rongony 12kg kosa no mbola sarona tao anaty valizy ana jiolahy nentin'ny taksibrosy rehefa nanao fisavana ireo zandary avy ao amin'ny kaompanian’Antsohihy ny harivan'ny 8 septambra teo. Avy any Port Bergé ho any Antsohihy ka teo Ankerika 12km atsimon'i Antsohihy no tratra. Nampidirina "fourrière" ilay fiara. Notazomina vonjimaika avokoa ireo jiolahy ho amin'ny famotorana ary efa natolotra ny fampanoavana. Nodorana avy hatrany teo imason'ny manampahefana avy ireo rongony rehetra ireo.